Kooxda Balwo - Wikipedia
Kooxda Balwo () waxay ahaayeen koox hobolo, fanaaniin, heesaa, majaajilo, ruwaayado, iyo bandhigyo faneed ku caan ahaa oo u dhashay wadanka Soomaaliya. Kooxda Balwo waa kooxdii ugu horeeysay ee sameysa heesaha jacaylka iyo kalgacalka ee Soomaalida, waxaana kooxda bilaabay Aabaha Fanka Soomaalida Cabdi Sinimo wakhti lagu qiyaasay sanadkii 1943kii.
1943kii ilaa 1960meeyihi
Cabdi Deeqsi Warfa, Hobolada Waaberi, Heeso Soomaali
Balwo waa nooc ka mid ah heesaha Soomaalida. Balwo waa heesihii ugu horeeyay ee jacayl iyo kalgacal ku salaysan kuwaasi oo muusik loo garaaco. Markii ugu horeeysay, heesahan waxaa sameeyay Aabaha Fanka Soomaalida Cabdi Deeqsi Warfa. Heesaha Balwo waxay ka bilaabmeen magaalada Borama, gobolka Awdal wakhti lagu qiyaaso intii u dhaxaysay 1940 ilaa 1945kii. Balwo waa hab iyo qeyb ka mid ah heesaha iyo Fanka Soomaalida taasi oo ah aasaas iyo sal u ah habka heeso Soomaaliga casriga ah. Heesaha Balwo waxaa bilaabay koox uu aasaasay aabaha fanka Soomaalida Cabdi Sinimo wakhti qiyaastii ku beegan 1935kii.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kooxda_Balwo&oldid=167542"
Last edited on 19 Maarso 2017, at 05:18
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 19 Maarso 2017, marka ee eheed 05:18.